Sh. C/qaadir Gacamey oo Garoowe lagu Aasay
Khamiis, Bisha Shanaad 05, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 00:09
Magaalada Garoowe, waxaa galabta lagu aasay, Alle ha u naxariistee Sheekh Abdulqadir Nuur Faarax (Gacamey) oo shalay halkaasi lagu dilay. Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa canbaareeyey dilkaasi, waxuuna tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed iyo ehelada Sheekha uu ka geeriyooday. Culumo waaweyn oo Somaliya laga yaaqaan iyo mas’uuliyiin ayaa ka qeybgalay Aaska sheekha.
Dhinaca kale qaar ka mid ah culumadii ka qeybgashay Aaska ayaa soo jeedisay in la isugu yimaado shirweyne , qeybaha kala duwan ee soomaalida ay isugu imaanayaan oo looga arinsado waxey ku tilmaameen musiibo sii socota.
Warbixn ku saabsan Aaska halkan hoose ka dhageyso
Dhageyso Warbixinta Aaska Sheekha